Yini izikhungo zamandla ezomnotho? | Ezezimali Zomnotho
Yini izikhungo zamandla ezomnotho?
Vele, uma uzotshala imali oyilondolozile ezimakethe zezimali, ngeke ube nenye indlela ngaphandle kokwazi izikhungo okuyizona ezimaka amandla ezomnotho emhlabeni. Lapho bonke abatshalizimali begxila amehlo abo ekwazini okufanele bakwenze ngaso sonke isikhathi. Yebo izikhundla ezivulekile kuzimpahla zezimali noma, kunalokho, uhlehlise izikhundla zawo ezimakethe zezimali. Ngenzuzo yokuthi lezi zikhungo zezezimali zizokunikeza imihlahlandlela yokuthi wenzeni ekusebenzeni kwakho emakethe yamasheya.
Izikhungo zamandla ezomnotho aziziningi, kepha-ke zibaluleke kakhulu. Ngezinga abanquma ngalo ukuvela kwezimakethe zezimali, ngandlela thile, njengoba kuye kwenzeka eminyakeni yamuva. Akumangalisi ukuthi kungaba ithuluzi elinamandla lokuthola imali emsebenzini ngamunye ozovula kusukela manje kuqhubeke. Noma okungenani njengokuvikela utshalomali. Ngoba awukwazi ukukhohlwa ukuthi bazokunikeza imininingwane ebaluleke kakhulu ngesimo sangempela sezwe lemali.
Ukuya ezikhungweni zeqiniso zamandla ezomnotho kuzofanele uye ezindaweni eziyizifanekiselo njenge IWashington, iFrankfurt noma iVienna. Futhi ungakhohlwa ukuthi lamadolobha ayizikhungo zezinhlangano zezomnotho ezibaluleke kakhulu. Kuvela lapho izinqumo ezifanele kakhulu ezithinta izimakethe zezimali. Kwesinye isikhathi ngama-oscillations anamandla kakhulu angafika ku-5% futhi alungele kakhulu ukwenza imisebenzi yokuhweba noma ngesikhathi esifanayo sokuhweba.
1 Izikhungo zamandla: ukuqondiswa kokuhwebelana
2 IVienna, inhlokodolobha kawoyela
3 Washington noma amandla edola
4 Indlunkulu yeSikhwama Sezimali
5 IDolobha liyimakethe ebaluleke kakhulu
6 Njengesilinganiso seqhinga
Izikhungo zamandla: ukuqondiswa kokuhwebelana
Ngalesi sikhathi ungahle uzibuze ukuthi lezi zikhungo zomhlaba zezomnotho zikuphi. Ikakhulu, ukuze ukwazi ukubazi kakhulu ukuhambisa imisebenzi yakho emakethe yamasheya. Asatshalaliswa kuyo yonke i-geography yamazwe omhlaba, noma ngabe kungamazwekazi aseMelika nawaseYurophu lapho amelwe khona kakhulu. Ngezikhungo ezisezindabeni zamazwe amakhulu emhlabeni. Akumangalisi ukuthi nabo ngokwengxenye banquma ngempilo yakho yemali. Kufika lapho lapho konke abasebenza kwezomnotho bayazazi izinqumo zabo.
Vele, esinye sezikhungo ezibaluleke kakhulu zamandla kwezomnotho ngokungangabazeki idolobha laseJalimane iFrankfurt. Akumangalisi ukuthi yindlunkulu yaphakade ye- I-European Central Bank (ECB) okunguyena olawula izinqubomgomo zezimali endaweni ye-euro futhi ongusihlalo wayo nguMario Draghi wase-Italy. Ibe nomthelela omkhulu emakethe yamasheya futhi iyaqhubeka. Ukufika ezingeni lokuthi ingenza izimakethe zezezimali ziwe noma zikhuphuke nganoma yisiphi isikhathi. Yingakho kungamangazi ukuthi kuyithuluzi ongasebenzisa imisebenzi yakho emakethe yamasheya.
IVienna, inhlokodolobha kawoyela
Eduze kakhulu nenhlokodolobha yezezimali yaseJalimane inhlokodolobha yase-Austria, iVienna. Kube ikomkhulu iminyaka eminingi Inhlangano Yamazwe Athekelisa Uphethiloli (OPEC). Lapho kwenziwa khona amasu ale mpahla ebalulekile yezezimali. Lapho ingabamba khona intengo kawoyela ongahluziwe kususelwa ezinqumweni ezenziwe abakhiqizi bale mpahla yezezimali. Vele, izimakethe zezimali ezilinganayo nazo ziyazi kahle ukuthi kwenzelwa ini kule mihlangano ngamanye amazwe anamandla amakhulu emhlabeni.
Ngakolunye uhlangothi, noma isiphi isinqumo esenziwe ngamalungu aso sinciphisa umkhiqizo wabo bese intengo kawoyela inyuka ezimakethe zezezimali. Kungaba ukuthatha izinqumo zokutshala imali ku-oyela noma ngokuhlukile ngamanani axhumene kakhulu nalokhu okuluhlaza futhi afakwe kuhlu emakethe yamasheya. Leli isu elisebenza kahle ukulinganisa ukuthi isibhamu sizongena kuphi emavikini azayo futhi ngale ndlela senze ukonga okusebenzayo kokonga. Njengoba kwenzeka ezinyangeni ezedlule ngokubuyekezwa kwale mpahla yezezimali eyeqe okudlula okubalulekile amazinga amadola angama-70 umphongolo.
Washington noma amandla edola
Inhlokodolobha yase-United States iyaqhubeka nokuba ngesinye sezikhungo zemizwa sokulandela umnotho ngombono wokutshalwa kwezimali. Hhayi nje ngoba yindawo yokuhlala kamongameli wezwe elicebe kakhulu emhlabeni. Kepha ngoba kulapho izinqumo zithathwa yi Federal Reserve wase-United States (FED). Kukho konke okuphathelene nentengo yemali kanye nomthelela oqondile kuzo zonke izindawo zezomnotho zomhlaba. Ukuthi ingxenye enhle yabatshalizimali ibhekise amehlo abo kule ngxenye yomhlaba ukuze balolonge isu labo lokutshala imali. Ngokuya ngezinqubomgomo zezimali abazithathayo kulo mzimba obaluleke ngokukhethekile emhlabeni jikelele.
Ukukhuluma ngeWashington ukubhekisa ebudlelwaneni nezimakethe zezezimali. Yize lezi zitholakala eNew York, ezimelwe ku- Wall Street okuyilapho kushintshaniswa izigidi nezigidi zamatayitela nsuku zonke. Kulokho okubhekwa njengenye yezimboni zongxiwankulu besimanje futhi okuyindawo yokubhekiswa kwengxenye enkulu yabatshalizimali abancane nabaphakathi emhlabeni jikelele. Ukuthi iphuzu lokuthi ama-stock indices amakhulu ancike ekunyakazeni okwenzeka kule ngxenye yomhlaba ebalulekile. Njengoba kuzokwenzeka kuwe ezikhathini ezingaphezu kwesisodwa lapho wenza utshalomali futhi uzama ukwenza izimpahla ezinqwabelene zenze inzuzo ngemuva kweminyaka eminingi yokusebenza.
Indlunkulu yeSikhwama Sezimali
Ngaphandle kokushiya indawo efanayo, sithola esinye isidalwa sokubaluleka okukhethekile njenge IsiKhwama Sezimali Zomhlaba Wonke (IMF). Noma yini efanayo, lapho kwenziwa khona izinqumo ezibaluleke kakhulu ngekusasa lezomnotho leplanethi. Akumangalisi ukuthi kuhloswe ngayo ukukhuthaza izinqubomgomo zokunwetshwa kwezomnotho phakathi kwamazwe nokuthanda ukubambisana kwezimali zomhlaba wonke. Uma le nhlangano yamazwe omhlaba ibonakala ngento ethile, kungenxa yokuthi ijwayele ukulungisa ukungalingani kwezomnotho emazweni amakhulu emhlabeni. Njengoba kwenzekile ngemuva kwakho konke engxenyeni enhle yabo, kufaka phakathi iSpain.
Vele, zonke izimakethe ziyayizwela imibiko yazo, futhi ngenxa yazo amasheya esitokwe ahamba ngendlela ethile ngokuqina okuthile. Kufike eqophelweni lokudala ukunyakaza okunamandla kakhulu ezimakethe zezezimali. Ngomehluko obalulekile phakathi kwezintengo eziphakeme nezincane zezokuphepha nokuthi kwezinye izimo kungenzeka yeqa 2% noma 3% amazinga. Kuthande kakhulu abatshalizimali abacabangelayo ababona ukuthi ngesikhashana esifushane bangathola kanjani iphothifoliyo ebalulekile yokuthola imali. Ukwazi njalo ukuthi i-International Monetary Fund ingathini nganoma yisiphi isikhathi.
IDolobha liyimakethe ebaluleke kakhulu
Ezwenikazi laseYurophu, London ibamba iqhaza elibaluleke kakhulu kwezezimali zomhlaba wonke. Ngaphezulu kweminye imikhakha enobukhona obukhethekile ebudlelwaneni bamanye amazwe. Akumangalisi ukuthi inhloko-dolobha yaseBrithani ithathwa njengenye yezindawo ezinkulu kakhulu zokutshala imali. Hhayi kuphela emakethe yamasheya, kepha nganoma yiluphi uhlobo lwefa lezezimali. Izinto zokusetshenziswa, izinsimbi eziyigugu kanye nokuphuma kwezezimali phakathi kokunye okubaluleke kakhulu lapho ungenza khona ukonga kube nenzuzo kusuka manje. Konke kuyathengwa kuthengiswe eDolobheni futhi kwenzeka kube yisethenjwa sanoma yimuphi umtshalizimali. Futhi kungakhohlwa ukuthi ingxenye enhle yabalamuli bezezimali emhlabeni wonke iyasungulwa.
Kuyiparadesi yokuhwebelana kwembulunga yonke njengoba ikhona kuzo zonke izingxenye zezomnotho zomhlaba futhi njengoba zimbalwa izimakethe zezimali ezenza ngalo mzuzu nje. Konke lokhu yize besanda kwehlukana nezikhungo zase-Europe njengomphumela we-brexit evunywe ngonyaka odlule. Kepha lokho akukususanga ekubalulekeni kwale ndawo yaseYurophu kuhlelo olusha lwezezimali. Akumangalisi ukuthi imali ye-UK ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu emhlabeni. Ngevolumu yokuhweba ephezulu kunazo zonke izimakethe zamasheya zomhlaba jikelele.
Njengoba kungenzeka ubonile, kunezikhungo eziningana zamandla ezomnotho ongathola kuzo ireferensi yokuthatha isikhundla emakethe yamasheya kusukela manje kuqhubeke. Ngenhloso eyinhloko yokwenza ngcono izimpahla zakho. Ngoba uzoba neminye imininingwane ongazisebenzisa ngazo ezinqumweni ozozenza. Hhayi kuphela uma kukhulunywa ngokutshalwa kwemali okuqondile emakethe yamasheya. Uma kungenjalo, khetha ezinye izixazululo obekungeke kuze kube manje uzicabange ukwenza ukonga kube nenzuzo.
Vele, awukwazi ukukhohlwa ukuthi lezi zikhungo zezezimali zingaba yisixazululo sokukhuthaza isu elichazwe kahle lokutshala imali. Lapho, ngaphezu kwakho konke okunye, ukuba namathuluzi wokuhlaziya ukwenza izinqumo ezinhle kakhulu. Ngaphezulu kokunye ukucatshangelwa kobuchwepheshe futhi kusuka endaweni yokubuka enamasu amaningi. Ukuze ngale ndlela ufeze zonke izinhloso zakho emkhakheni wemakethe yamasheya. Ngemiphumela engcono ku-akhawunti yakho yokutshala imali.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Yini izikhungo zamandla ezomnotho?